ko htike's prosaic collection: ရန်ကုန်ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံတက္ကသိုလ်ကြီး ဘဝနေဝင်ချိန် ရောက်ပြီလား။
Posted by ကိုထိုက် at 03:00
ကောလဟာလ မဟုတ်တရုတ် သတင်းတွေ ရေးပြန်ပြီ၊ ယောင်္ကျားတန်မဲ့ကွာ၊ မင်းပြောတာ မင်ဘယ်သူမှ မယုံဘူး ဟေ့ကောင်၊ မင်းရဲက မရှိတဲ့ သိက္ခာကတော့ ထပ်ကျပြန်ပြီ။
Hello ko and myan law, why were you saying like that? Is that some parts of your occupations covering your father, psychopath Than Shwe's ass? Are you earning money from doing that kind of work? Shame on yourself,You know what! everybody hate that kind of person like you who don't know what is good and what is evil. Were you born to do that kind of nasty works? Be mature, guys.
I'm so famous here...Well done. Well...done.
Ko Htike...I notices thataguy called myan law keep commenting on every post of yours. He's interested in your point of views. That'sagood thing. "They" care about you. Well Done!!!!
ko and myan-law, သေသေချာချာ စဉ်းစားပါ။ အမုန်ကိုလေ့လာပါ။ ကိုယ့်အတွက်ပဲမကြည့်ပါနဲ့။ အရိုးစားပြီး အသားစားတဲ့ ပုံစံ နဲ့မပြောပါနဲ့ အဲဒီမင်းတို့ပြောတဲ့ ကောလဟာလ တွေးပဲ မှန်နေတာမဟုတ်လား မျက်ကန်းမျိုးချစ်မဖြစ်ပါစေနဲ့။ မလုပ်နိုင်ရင်နေပါ မနောက်ရှက်ပါနဲ့။ ကိုထိုက်ရေ ဂုဏ်ယူပါတယ်။
Well done! ko htike! they read every article you have written on your blog and they read every comment as well. They are so interested in us. They come here everyday to read it. We are in their mind. HOO........Hoo........
ကောလဟလ လား.. အမှန်တကယ်လား..မင်းတို့စောင့်ကြည့်ပေါ့ကွာ.. ko and myan-law . ဒီသတင်းဟာ ရန်ကုန်မှာလူတိုင်းသိနေတဲ့ သတင်း.။ ကောလဟလ ထင်နေရင်လဲ မင်းတို့မှာ ရန်ကုန်ကိုဆက်သွယ်စရာ အပေါင်းသင်း သူငယ်ချင်းရှိမှာပဲ မေးကြည့်ပေါ့ကွာ.။မဟုတ်ရင်။ မှားနေရင် မင်းတို့သိတာကို ဒီမှာလာပြန်ချရေးပေါ့ဟုတ်လား..မင်းတို့ပြောတာ ငါတို့လက်ခံရုံပဲလေ...။ မင်းတို့ကိုလဲ ပြန်လှန် လိုက်ဆဲနေစရာမလိုဘူး..။ မှားနေရင် မှားနေတယ်ဆိုတာ ၀န်ခံမယ် ဟုတ်ပလား???
18 January 2009 at 22:09
Yep, Ko-htike. Like I said in the other post, your blog is attracting attention of the junta so now they have to spend time responding to your post by asking low life thugs to write provocative material to each post :-)
We are getting somewhere. Be proud of it!
ko and myan-law ။ ။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဦးနှောက်တွေ သုံးလို့မရတော့ဘူးထင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ တစ်ဘ၀သာအကျိုးရှိပြီး ဘ၀ဆက်တိုင်းပူပင်ရမယ့် အပူစာတွေစားထားလို့လား? အမှန်ကိုမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ အချိန်မလွန်ခင် အမှားသံသရာကထွက်နိုင်အောင်လုပ်ပါလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်တွေ ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာ အသိတရားရှိတဲ့သူတိုင်းနားလည်ပါတယ်။
ကိုဆိုတဲ့သူကလဲ သူတို့ဘက်တော်သားပဲမို့ သွေးရူးသွေးတန်းနဲ့ ရေးခဲ့တာပဲဆိုတာ လူ့အသိစိတ်နဲ့ဥာဏ်ပညာကြွယ်ဝတဲ့သူတိုင်းသိကြမှာပါ
တကယ်ပြည်သူတွေကတော့ ဘယ်သူတွေကဆိုးနေတယ် ဘယ်သူတွေက တိုင်းပြည်အတွက်ကိုယ့် မြေအတွက် တကယ်ခံစားနေကြတယ်ဆိုတာ ကိုကောင်းကောင်းကြီးသိပါတယ်။ တို့တွေအားလုံးတန်ဖိုးထားရတဲ့ ကျောင်းတော်ကြီးကို ညစ်ညမ်းစေတာတော့ ပညာကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ တကယ်ပဲကြေကွဲရပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်တကယ်တန်းတရားသဘောနဲ့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် သူတို့တွေဒီလူတစ်သက်မှာပဲစံရမှာပါ သေပြီးရင် ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာ မတွေးရဲအောင်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။